အသက် ၂၈ နှစ် - ED ကုသခြင်း - ကျွန်ုပ်၏အမျိုးမျိုးသော PIED အမျိုးအစားအတွေ့အကြုံနှင့်သီအိုရီများ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၂၈ - ED ကုသခြင်း - ကျွန်ုပ်၏အမျိုးမျိုးသော PIED အမျိုးအစားရှိအတွေ့အကြုံများနှင့်သီအိုရီများ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နှစ်တာ၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်အနားယူနေသော်လည်းဤသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးပို့စ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာမူ၌ကျွန်ုပ်၏ ED ပြproblemနာကိုမည်သို့ရှာဖွေ။ ကုသရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီ၊ အပျိုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီး၊ ၁၅ နှစ်မှစ၍ တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်အကြမ်းအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အစပိုင်းတွင်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မလုပ်ခဲ့လျှင်တစ်နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောကြာရှည်ခံစေမည့်အရာမရှိလျှင်ပင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်လာသည်။ (ယခုကျွန်ုပ်သည်ဤစွမ်းရည်ကိုမည်မျှလိုချင်သည်ကိုဘုရားသခင်သိသည်။ ) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ထိုပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခုတော့ငါအမှန်အတိုင်းပြောရရင်ငါမှားသွားပြီဆိုတာသိပြီ၊ အဲဒါကစွဲလမ်းမှုလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ငါ့“ ဖြေရှင်းချက်” ကစွဲလမ်းမှုကိုပိုဆိုးစေခဲ့တယ်။
တစ်ခုသာရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ် NoFap ပင်တနေ့ပြီးနောက်, ရှိသမျှမှာအဘယ်သူမျှမစိုက်ထူငါ PMO များအတွက်အလွန်အားကောင်းတဲ့နီးပါးတွန်းလှန်မတရားသောတွေ့ကြုံခံစားလို့ရသေးငါ၏အလိင်တံ flaccid နေဆဲဖြစ်သည်။
တစ်ခုစိုက်ထူရဖို့ငါစောင့်ကြည့် porn နှင့်လေဖြတ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ငါပျော့ glans နှင့်အတူ, ငါ့စိုက်ထူအတွက်အများဆုံး 70% ခိုင်မာသောမှာရယူပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် (သုတ်ရည်မပါဘဲ) စိုက်ထူခြင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်၎င်းသည်ချက်ချင်းနောက်မှအခြားတစ်ခုရရှိရန်ခက်ခဲပြီးတစ်ခါတစ်ရံမဖြစ်နိုင်ပါ။
ငါသည်အခြားစိုက်ထူရနိုင်မတိုင်မီသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်ကြောင့်မကြာခဏထက်ပို 12 နာရီကြာပါတယ်။
ငါအကြမ်းဖျင်း 30-60 မိနစ်ကြာရှည်မည်ဟုသောသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက် flaccid တစ်ခက်ရ။
self-Diagnosis: သီအိုရီ 1
ရောဂါလက္ခဏာတွေကို: PIED ။
ရောဂါပျောက်ကင်း: NoFap (စက် Mode ကို) ။
ကျွန်မပထမဦးဆုံး PIED အကြောင်းကိုဖတ်ပါနဲ့ကျွန်မပြန် 2012 အတွက် PIED ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးတော့အလေးအနက်ထားတဲ့ reboot start ဖို့လုံလောက်တဲ့စိတ်ကိုပါဝါကိုစုဝေးစေကြောင်းဧပြီလ 2014 ၌ရှိ၏။
လက္ခဏာ 1 ငါ PMO စွဲခံခဲ့ရသည်တစ်သေချာအထောက်အထားကိုစဉ်းစားရာဖြစ်တယ်။
ခက် mode ကို reboot ၏7လကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မလုံးဝသွားပြီခဲ့ကြသည် 1,2,6,7 ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းနှင့်နံနက်တောအုပ်ကိုပြန်ခဲ့ကြလို့ပဲ။ ငါ၏အ PMO စွဲအဓိကအား, ကုသခဲ့ခံစားခဲ့ရ
ငါလိင် (TV ပေါ်မှာတစ် sexy မိန်းကလေးမြင်နေလို့ပြော) နှိုးဆွခဲ့သည်အခါတိုင်းယင်း၏မာကျောသည့်ဆွ၏ခွန်အားပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားလိမ့်မယ်ပေမယ့်ဒီအချိန်မှာ, အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ဦးစိုက်ထူတယ်။
လက္ခဏာ 3: နေဆဲနေဆဲ 70% max ကိုနူးညံ့ glans န်းကျင်မှာအားလုံး NO တိုးတက်မှု။
လက္ခဏာ 4: ငါ 60% max ကိုလှည့်ပတ်ထရပ်နေသည့်အခါယခုတစ်စိုက်ထူရပေမယ့်အားနည်းနိုင်ပါတယ်။
လက္ခဏာ 5: အများကြီးစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်း, ဒါပေမယ့်မအခြို့သောတိုးတက်မှုများ။ ကျွန်မအိပ်ရာမှထရချက်ချင်းပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏နံနက်တောအုပ်ကိုဆုံးရှုံးမယ်။
လက္ခဏာ 8: Hard, သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်ရှိသေးခြင်းမရှိတိုးတက်မှု flaccid ။
self-Diagnosis: သီအိုရီ 2
ငါအလေးအနက်ထားငါသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ခဲ့ကြောင်းသံသယခဲ့သည်ရှာဖွေပြီးနောက်, ဝမ်းနည်းခဲ့သည်။ သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ပေါ်ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုအောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြထားတယ်:
Venogenic Erectile အလုပ်မဖြစ်ခံစားနေရပြီးအများစုမှာယောက်ျားလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှမိမိတို့စိုက်ထူနှင့်အတူဒုက္ခရှိခြင်းကိုစတင်ပါ။ ဘုံတိုင်ကြားချက်များပါဝင်သည်; တစ်ဦးကလိင်ဆက်ဆံဘို့မလုံလောက်နာတာရှည်ပျော့စိုက်ထူ, အနေအထား-မှီခို erectile မာကျောမှု, အခက်အခဲစိုက်ထူရရှိ, အခက်အခဲစိုက်ထူစဉ်အတွင်းစဉ်ဆက်မပြတ်လက်စွဲစာအုပ်ဆွခြင်းမရှိဘဲစိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်တံ၏ပျော့ပျောင်း glans ထိန်းသိမ်းခြင်း။
ငါအဆုံး၌ငါအချို့လေ့လာမှုများအားကြီးသောတင်ပါးဆုံတွင်းကြွက်သားဖိအားသွေးပြန်ကြောကကူညီခြင်းနှင့်လိင်တံထဲကရတဲ့အနေဖြင့်အသှေးကိုတားဆီးနိုငျသောကွောငျ့သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်နှင့်အတူကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းပြသပေးသော kegels, ကြိုးစားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်အတွက်အများအပြားဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှုတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုနေခဲ့ရသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်ငါ kegels ခြောက်သွေ့ orgasm, စသည်တို့ reverse, kegels အပေါ်ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုခြင်းအခြားရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်, ငါသူတို့ထံမှရရှိခဲ့သိကျွမ်းခြင်းပညာကနေငါတဖြည်းဖြည်းငါ၏အပြဿနာများအပေါ်အခြားသီအိုရီရေးဆွဲပြီး။
နောက်ခံသမိုင်း - ကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်တစ်လျှောက်ကုလားထိုင်၌သက်တောင့်သက်သာထိုင်။ အများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သည်။ ၅ မိနစ်အတွင်းအပြီးသတ်သည်။
အများကြီး Edge သူတွေကိုဖြစ်ကောင်းလည်းပိုကောင်းသူတို့ရဲ့တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်း။
ကျွန်ုပ်သည်စစ်မှန်သောလိင်ကိုမပြုလုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အနားမယူပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းအားနည်းစွာဖြစ်စေသောကြောင့်ထိုင်ခြင်း (တစ်ကိုယ်ရည်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါသဘာဝဖြစ်ခြင်း) သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်သောကြောင့်အလွန်အားနည်းနေပါသည်။
ငါသည်ငါ့ PMO စွဲထင်ရသောပြီးသားပျောက်ကင်းအောင်ကုသခံခဲ့ရသည်ထိုနောက်ငါနေဆဲ EQ ပြဿနာများရှိခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဤယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါကသီအိုရီအ 3-5, အထူးသဖြင့် 4, သကဲ့သို့ငါ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကရှင်းပြသည် ရပ်တည်မှုအနေအထားအတွက် PF ကြွက်သားခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေအပိုဖိအားအောက်မှာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို့ကြောင့်တစ်ခုစိုက်ထူဖွင့်ဖို့ကသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထပ်မံပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ဒီမတိုင်မှီငါသည်ဤလက္ခဏာတွေ့ရှိကိုအကောင်းဆုံးရှင်းပြချက်ကိုငါ့ဦးနှောက်ဟာရပ်တည်မှုအနေအထားမှလျော့နည်းနေသားတကျခဲ့ကြောင်းရိုးရှင်းစွာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ (အတော်လေး) ငယ်ရွယ်ကျန်းမာ, နှင့်မည်သည့်လမ်း၌ငါ့လိင်တံဒဏ်ရာရဘယ်တော့မှငါမဆိုလိင်တံပျတိုး technique ကိုကြိုးစားခဲ့ဘယ်တော့မှ, ငါ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ technique ကိုအလွန်ပျော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ရန်ဤသီအိုရီကိုမျက်နှာသာ။ ထို့ကြောင့်, ငါသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ရှိသည်သောအခွင့်အလမ်း (ယခုငါ၏အနာလန်ထူကစိစစ်သော) ပါးလွှာဖြစ်သင့်သည်။
အောက်ပါ kegels ၏တစ်ဦးတည်းသာရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက် Minuteman ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကျွန်မပတ်ပတ်လည် 90% ခိုင်မာသောမှာနံနက်သစ်သားကြုံတွေ့! ဒီအစဉ်အမြဲငါထက်ပို 70% ခိုင်မာသောမှာစိုက်ထူအောင်မြင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အခုတော့ kegels ၏နှစ်လပြီးနောက်ရောဂါလက္ခဏာတွေ 3-5 သွားကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ငါလွယ်လွယ်ကူကူဆွခြင်းမရှိဘဲ 90 စက္ကန့်တစ် 30% စိုက်ထူထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
ယခုကျန်ရှိနေသောအရာမှာလက္ခဏာ ၈ ဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကပြproblemနာတစ်ခုထက်မကစေနိုင်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမှလွဲလျှင်၎င်းသည်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အလေ့အထများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါသင်ထိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်လဲလျောင်းခြင်းသည်သဘာဝကျပြီးသင်ထိုးဖောက်ရန်မလိုသောကြောင့်အားနည်းသောစိုက်ထူမှုနှင့်ဝေးဝေးနေနိုင်သည်၊ ယင်းတို့အားလုံးသည်သင်၏တင်ပါးဆုံတွင်းကြွက်သားများကိုလေ့ကျင့်ခန်းနည်းစေနိုင်သည်၊ အလှည့်သင်တစ် ဦး ပင်အားနည်းစိုက်ထူပေးသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ဆိုးဝါးသောစက်ဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာ - သင်မလုပ်နိုင်ပါကရပ်တည်မှုအနေအထားတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအရှုံးပေးနိုင်သည်) ။ငါ PIED တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အမျိုးအစားခေါ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့မိုင်အကွာအဝေးကွဲပြားလိမ့်မည်။ အဲဒီမှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်း kegels အများကြီးလုပ်ပေးသူကိုငါ့ဥစ္စာထက်ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်အတူလူတွေ, ဖြစ်ဟန်နှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်အားနည်းခြင်းဖြစ်ကောင်းသူတို့ကိုပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအတိအကျကွောသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အတူကိုက်ညီရင်တောင်, သင်ဆဲရှိသည်မပြုစေခြင်းငှါ, သေးစိုးရိမ်ထိတ်လန်ပါဘူး။ IMO ED သူတို့အမှန်တကယ်သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ပြီသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ပြီထင်တယ်သူကလူဦးတိကျစွာ diagnose.Only သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းမှဒါစိတ်ပျက်စရာများနှင့်ခက်ခဲသည်အဘယ်ကြောင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်တူညီတဲ့လက္ခဏာတွေအဘို့များစွာသောအခြားဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများရှိပါတယ်။
ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံ YBOP ကိုအလွန်သင်သည်သင်၏စိုက်ထူအတွက်အောင်မြင်ရန်နိုင် max ကိုခိုငျမာမထိခိုက်ပါဘူး, ထိုအကြံပြုပုံရသည်။ ဤသည်ကိုလည်း YBOP သီအိုရီသူ့ဟာသူကထောက်ခံခံရဖို့ပုံရသည်။ ကဆွ၏အဆင့်မြင့်ဖို့နေသားတကျလုပ်မယ့်ကြောင့်အ YBOP အဆိုအရသင့်ဦးနှောက် desensitized ဖြစ်ပါတယ်။ NoFap ပြီးနောက်, ငါအများကြီးတစ်ခုစိုက်ထူရနိုင်: ဤ (အစစ်အမှန်လိင်ကဲ့သို့) ဆွ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်အောက်မှာသင့်ရဲ့စိုက်ထူအားနည်းစေသည်နေချိန်မှာသင်ရရှိသည့်ဆွဒီအားကောင်းတဲ့ enough.My ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုထောက်ခံပါတယ်လျှင်, သင်ဆဲအပြည့်အဝစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဖြစ်သင့် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ, ဒါပေမယ့်ငါအကြမ်းဖျင်းတူညီကျန်ရစ်ရနိုင် max ကို EQ ။
၏သင်တန်း, ဒီတစ်ဦးတည်းသာနမူနာဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤပေါ်တွင်သင်၏အတွေ့အကြုံများကြားနာအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်နှင့်ကြံ့ခိုင်မှုသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် ဒီကန်ဂျယ်လ်များမတိုင်မီတွင်ကျွန်ုပ်တွင်အားနည်းသောတင်ပါးဆုံရိုးရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း၎င်းသည်တင်းကျပ်လွန်း။ ခဲယဉ်းသောအရည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီပြmeနာကကျွန်တော့်ကိုတော်တော်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပြီးအထက်ပါပြproblemsနာတွေရဲ့သီအိုရီကိုမဖော်ထုတ်မှီတိုင်အောင်ငါ kegels (သို့) ပြောင်းပြန်ကန်ဂယ်တွေလုပ်သင့်မသင့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ရလဒ်ကတော့သင့်မှာအားနည်းပြီးတင်းကျပ်တဲ့တင်ပါးဆုံရိုးရှိနိုင်တယ်လို့ထင်ရပုံရတယ်။ ။ ဒါကအားနည်းနေရင်တောင်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အားစိုက်ထုတ်ရတယ်၊ ငါမသိဘူး။
စုံတွဲတစ်တွဲကိုပိုမိုလကြာ (အစဉ်မပြတ်ငါလုပ်နေတာပြီကဲ့သို့) kegels ၏ 50 အုပ်စုခွဲနှင့် kegels reverse: ငါ့လက်ရှိအစီအစဉ်တစ်ခု 50 လုပ်နေတာဆက်လက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါ၏အခက်ခဲ flaccid ပြဿနာရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်လျှင်ထိုနောက်မှငါသည်တ 40 မှ switching စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်: 60 သို့မဟုတ် 30: 70 လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်။
ဒီသီအိုရီကိုအရင်ကထုတ်ဖော်ခဲ့ဖူးလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရှာမတွေ့ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်ကိုက်ညီသော်လည်း၎င်းသည်မှားယွင်းနိုင်သည်။ ငါသည်ဤသီအိုရီအပေါ်သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဒီရှည်လျား post ကိုဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
LINK - PIED ၏အကြှနျုပျ၏အမျိုးမျိုးအမျိုးအစားပေါ် [ED ကုသပေးခဲ့] အတွေ့အကြုံများနှင့်သီအိုရီ